33 प्रहरीले अचानक पुरानो जोस ब्रेकलाई वर्ष पछि पछाडि फर्काइदिन्छ! मार्टिन भिजल्याण्ड
यो एक छिटो खोजी थियो, निस्सन्देह, र यो असंभव काम थियो, अचानक यो त्यहाँ थियो जोस ब्रेचको पुरानो फाइल, जसमा उनले कम उमेरका केटाहरूसँग यौन दुरुपयोग गर्थे। त्यो मामला बिरामीलाई बिदा भयो, तर यसले कुरा गर्दैन। पीटर आर डी देस्सेले यो सबै समय आफ्ना सबै सम्पर्कहरूका साथ व्यवस्थित गर्न सकेन जुन पुलिसमा फर्किएको थियो, तर अचानक त्यहाँ त्यहाँ त्यहाँ छ! राम्रो! चमत्कारहरू अझै संसारबाट बाहिरिएका छैनन्, र तिनीहरूले पुलिस र न्यायपालिकाले लोक हत्याको काम गर्दैनन्।
यसको अलावा, एक अखबार कपी गरेर फेला परेको छ! त्यो पनि एकदम राम्रो अनुसन्धान हो! फोटोसप र अन्य प्रविधिहरूको बारेमा फेरि फेरी सुरू गरौं। यो बस तोड्दै छ!
योस ब्रेकको नाम लेखमा उल्लेख गरिएको छैन। के यो ब्रेक पस्सी जसले यस PsyOp (मनोवैज्ञानिक अपरेशन) कताई मद्दत गर्न थालेको छ भने यो समय स्पष्ट थिएन? कथा सबै पक्षमा रचना गर्दछ र किनकि 12 डिसेम्बरमा मुकदमा आउँदैछ, यो मकईको पुनरुत्थान र सुदृढिकरणको लागि पहिले नै समय हो।
त्यो 2014 पछि पुलिसको अभिलेख एक भाग हो डिजिटल संग्रह प्रक्रिया हामी भर्खरै राम्रो गर्दैनौ। त्यो सबै कागजातहरू लामो समयसम्म 1 खोजीसँग पपअप गर्न सकिन्छ, हामी उल्लेख गर्दैनौं:
2014-2017 सेवकाईको सूचना योजनामा, सीडीडी + दस्तावेजको संग्रह र आपराधिक न्यायमा र विदेशी चिनोको लागि आम सुविधाको रूपमा नामकरण गरिएको छ।
बेशक यो बहस हुन सक्छ कि यस्तो ऐतिहासिक फाइल स्क्यानिङ एक नौकरी को नरक हो, तर अभिलेखको पुरानो समयको साथमा तपाईले दर्ता र अन्य असामान्य अनुक्रमणिका डेटा संग एक दर्ता गरेको थियो। केवल सोच्नु भएको छ कि कुनै फाइल नष्ट भयो, मलाई पीटर आर डी वेल्स को माध्यम ले सबै मिडिया ध्यान दिए को बहिष्कृत लाग््छ। बिरालो बिन्दु बनाउनुहोस् जुन तपाईंले त्यस्ता फाइल फेला पार्न 33 वर्ष गर्नु पर्छ! ठीक छ, बीस वर्ष, किनकी निकवाई वर्टरपेनको बीस वर्षको उमेर हो। यो उल्लेखनीय छ।
यो अझै पनि तथ्यबाट अलग छ कि 1985 बाट सम्भावित खारेज गरिएका घटनाले यो अवस्थामा कुनै प्रमाण प्रदान गर्दैन, तर केवल 'मिडिया' प्रक्रियाद्वारा परीक्षणलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं फेरि फेरि 28 सेप्टेम्बर 2018 लेख लिनुहोस्। यदि तपाईं यसलाई समस्या पनि लिनुहुन्छ सम्पूर्ण फाईल पढ्नको लागी, तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि हामी धेरै राम्रो परिणामहरु संग महत्वपूर्ण PsyOp सँग सम्भव हुने सम्भव छ।
धेरै मानिसहरूका लागि, तथापि, यो सबै भन्दा राम्रो रमाइलो छ कि यो सबै दूर। आखिर, हामी हाम्रो कोकोन मा मीडिया द्वारा बनाईएको विश्वव्यापी मा परेशान नहीं गर्न चाहते। यो धेरै परिचित छ र हामी साजिशकारी वा एक नै कट्टिजलाइजेशन प्रक्रिया को भाग गर्न चाहँदैनौं किनकि हामी अमेरिका वा बेलायतमा ब्रेक्सिटका लागि हेर्न सक्छौं (पढ्न यहाँ).
स्रोत लिङ्क सूची: telegraaf.nl, justid.nl
ट्याग: 1984, 1985, रेकर्ड, विशेष, फेला पर्यो, जोस ब्रेच, खनिज, Nicky Verstappen, व्यभिचार, पुरानो, मिडिया द्वारा परीक्षण, संदिग्ध, निन्दा गरे
« Google ले खोज नतिजाहरु जोस ब्रेक मेटाउँदछ - निकवी वर्स्टप्पेन मार्टिन व्रिजल्याण्डसँग जोडिएको छ
ब्लक फ्रेजिशियन, विरोधी-पाइट सक्रियता र राजनीतिक खेल »
कुल भ्रमण: 1.216.148
Abderrazak समीर op कोरोनाभाइरस, क्यू अनन, ट्रम्प, बोलसनोरो, बोजो, अप्रिल १ को गहिराइ र इन्टरनेट बन्द?
Killumimati 777 .XNUMX op कोरोनाभाइरस, क्यू अनन, ट्रम्प, बोलसनोरो, बोजो, अप्रिल १ को गहिराइ र इन्टरनेट बन्द?
मार्कोस op कोरोनाभाइरस, क्यू अनन, ट्रम्प, बोलसनोरो, बोजो, अप्रिल १ को गहिराइ र इन्टरनेट बन्द?